शनिदेवको पुजा गर्दा हुन्छ यस्तो लाभ ! पुजा गर्ने विधि जान्नुहोस् ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/शनिदेवको पुजा गर्दा हुन्छ यस्तो लाभ ! पुजा गर्ने विधि जान्नुहोस् !
शनिदेवको पुजा गर्दा हुन्छ यस्तो लाभ ! पुजा गर्ने विधि जान्नुहोस् !
धार्मिक ग्रन्थहरुमा शनिबारलाई विशेष दिनको रुपमा मान्ने गरिएको छ । ब्रहमान्डलाई नौ ग्रहहरुको रूपमा वर्णित गरिएको छ । यी नौ ग्रहहरूमा, शनिलाई न्यायाधीश मानिन्छ । शनि सूर्य भगवानको पुत्र हो र मकर कुकुरको मालिक हो। हरेक हप्ता शनिमा तेल दान गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ ।ज्योतिषका अनुसार, शनिदेवलाई खुशी पारेर तपाईले आफ्नो जीवनमा नयाँ उर्जा ल्याउन सक्नुहुन्छ । शनि देवसँग सम्बन्धित केही खास चीजहरूबारे अत्यत्तै जानकार हुनुपर्दछ ।
आज शनिबार शनिदेवको पुजा गर्दा हुन्छ यस्तो लाभ ! पुजा गर्ने विधि जान्नुहोस् !
शास्‍त्रको अनुसार शनिदेव सूर्य देव र देवी छायाका पुत्र हुन। इनको जन्म ज्येष्ठ महिनाको अमावस्यामा भएको थियो । शुद्ध मन बाट प्रत्‍येक शनिवारको दिन व्रत राखदा शनि अत्‍यंत प्रसन्‍न हुन्छन्। यस्तो गर्ने ब्यक्ति माथि उनको कुपित दृष्‍टि पर्दैन। शनिको प्रभाव पनि खत्‍म हुन्छ ।
विशेष लाभका लागि गरौ यो उपाय
यसदिन केहि खास उपाय पनि गर्न सकिन्छ । जस्तो सूर्योदय भन्दा पहिला शरीरमा तेल मालिश गरेर स्नान गरौ। यस दिन ब्रह्मचर्यको पालन गर्दा लाभ मिल्छ। कुनै पनि यात्र नगरौ । गाइ र कुकुरलाइ तेलमा बनेको चीजहरु खिलाउ यसले विशेष लाभ हुन्छ। यस दिन शनि मंदिरमा शनिदेवको साथै हनुमान जी को दर्शन गर्नु शुभ हुन्छ। शनिदेवको आखामा हेर्नु हुदैन र प्रयास गरौ कि शनिवारको दिन सूर्य देवको पूजा नगरौ।
शनि जयंतीमा प्रात:काल उठेर स्‍नानादि गरेर शुद्ध होउ। त्यस पछी काठको टुक्रामा एक कालो कपड़ा बिछाएर त्यस माथि शनिदेवको प्रतिमा राखौ। त्यसपश्चात उनको मुर्तिको राखिएको काठको टुक्राको दुइटै कुनामा घिउको दीपक जलाउ र सुपारी चढ़ाउ। त्यसपश्चात शनिदेवलाई पंचगव्य, पंचामृत, इत्र बाट स्नान गराउ। उनिलाइ कालो या नीलो रंगको फूल चढाउ। त्यसपश्चात गुलाल, सिंदूर, कुमकुम र काजल लगाउ। पूजामा तेलमा तलेको वस्तुहरुको नैवेद्य समर्पित गरौ। यस दौरान शनि मंत्रको कम से कम एक माला जप गरौ।
शनिबार शनिदेवको पुजा गर्दा हुन्छ यस्तो लाभ ! शनिदेवको पुजा गर्ने विधि यस्तो छ !
शनि देवलाई एक महत्त्वपूर्ण देवता भनिएको छ, किनभने शनि देवले हाम्रो कार्यहरूमा फल प्रदान गर्दछ।शनी भगवान सूर्य को पुत्र हो र उसको आमा को छाया छ। यमराज उनका भाइ हुन् र यमुना उनकी बहिनी हुन् ।शनि देवको मानवका लागि शुभकामना छ जसले कडा परिश्रम, अनुशासनमा र धर्म पछ्याउने काम गर्दछ उसको सम्मान गर्नुपर्दछ ।
शान्त रहन हरेक शनिबार तेल दान गर्नुपर्छ।हरेक शनिबार शनिको साथ, पिपलको पनि विशेष पूजा गर्नुपर्छ। पिपल र खुर्सानीमा पानी छर्कनुहोस् ।शनीमा तेल चढाउँदा, ध्यान राख्नुहोस् कि तेल वरपरमा पर्दैन।शनिबार का’लो तिल दान गर्नुहोस्। छा’लाका जुत्ता र चप्पल पनि दान गर्दा शुभ मानिन्छ।हरेक हप्तामा शमीको रूखलाई पनि पूजा गर्नुहोस्। तेलको सामने तेलको दिपलाई जलाउने गर्नुहोस् ।हर शनिबार हनुमान को सामुन्ने सर्सुको तेल को दीप ज’लाएर हनुमान चालीसाको पाठ गर्नुपर्दछ ।
आउँनुहोस् जानौं शनिदेवसँग जोडिएका केही महत्वपूर्ण कुराहरुःशनि देवलाई एक महत्त्वपूर्ण देवता भनिएको छ, किनभने शनि देवले हाम्रो कार्यहरूमा फल प्रदान गर्दछ।शनी भगवान सूर्य को पुत्र हो र उसको आमा को छाया छ। यमराज उनका भाइ हुन् र यमुना उनकी बहिनी हुन् ।शनि देवको मानवका लागि शुभकामना छ जसले कडा परिश्रम, अनुशासनमा र धर्म पछ्याउने काम गर्दछ उसको सम्मान गर्नुपर्दछ ।
शान्त रहन हरेक शनिबार तेल दान गर्नुपर्छ।यो समय शनि धनु राशिमा रहेको छ । यसकारण वृश्चिक, धनु र मकर राशिमा पनि शनिको साढे सातको दशा रहेको छ ।वृष र कन्या राशिमा भने ढय्या छ ।हरेक शनिबार शनिको साथ, पिपलको पनि विशेष पूजा गर्नुपर्छ। पिपल र खुर्सानीमा पानी छर्कनुहोस् ।शनीमा तेल चढाउँदा, ध्यान राख्नुहोस् कि तेल वरपरमा पर्दैन।शनिबार कालो तिल दान गर्नुहोस्। छालाका जुत्ता र चप्पल पनि दान गर्दा शुभ मानिन्छ।हरेक हप्तामा शमीको रूखलाई पनि पूजा गर्नुहोस्। तेलको सामने तेलको दिपलाई जलाउने गर्नुहोस् ।हर शनिबार हनुमान को सामुन्ने सर्सुको तेल को दीप जलाएर हनुमान चालीसाको पाठ गर्नुपर्दछ ।
जानीराखौ ! बिहिबार भु’लेर पनि यस्ता कामहरु न’गर्नुहोस्